Talohan’izay dia efa filohan’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny indostria tao Toamasina i Rafidimanantsoa Narson ary koa efa filohan’ny GEL (Groupement des exportateurs de litchis) ivondronan’ireo mpandraharaha lodsia.
Zanak’Antanifotsy, ary efa nandray andraikitra sy nitondra ny anjara birikiny hatrany nanasoavana ity Distrika fiaviany ity ny tenany amin’ny maha vato nasondrotry ny tany azy. Na teo amin’ny fandriampahalemana izany, nanampiany ireo mpitandro ny filaminana, na teo amin’ny sosialy, toy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa anovozan’ny zanak’Antanifotsy fianarana.
Fanohizana sy fanamafisana izany fandraisana andraikitra nataony izany ampian'ny traikefa sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ananany no irotsahany hofidiana solombavambahoaka ato Antanifotsy.
(Doka fifidianana Solombavambahoaka)